ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်အတွက် A မှ Z လမ်းညွှန် Martech Zone
ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်အတွက် A မှ Z လမ်းညွှန်
အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 8, 2014 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကညွှန်ပြချက်သည်ကျွန်ုပ်ထိန်းသိမ်းထားသောကွန်ယက်၏တန်ဖိုးဖြစ်သည်ကိုစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကွန်ဖရင့်စကားပြောခြင်းနှင့်ကွန်ဖရင့်များသို့တက်ရောက်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်သည်နှစ်စဉ်အချိန်များစွာကုန်လွန်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လတ်တလောကွန်ယက်မှရရှိသောတန်ဖိုးနှင့်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်၏တန်ဖိုးသည်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသဘောပေါက်သည့်စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေနှင့်အောင်မြင်မှု၏ ၉၅% ရှိသည်။ ဒါကမင်းလိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီဖို့နည်းပညာကိုရှာပြီးအသုံးချဖို့ ၁၀ နှစ်ကျော်ကြိုးစားအားထုတ်မှုရဲ့ရလဒ်ပဲ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာသည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့မဟုတ်ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ ပါ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်.
ကျွန်ုပ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ကိုလူတို့နှင့်မတွေ့ဆုံမီကြာမြင့်စွာကတည်းကစတင်ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ယူဆလိုသည်။ မှန်တယ်လို့ပြောရင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့်တူသည်။ အဲ့လိုဖြစ်ရင်မင်းမချစ်ဘူးလား။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်တစ်ခုခုလုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာသင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်သိလိုသောအရာများဖြစ်သည်။ သင်ဟာအလုပ်ရှာဖွေနေသူပဲဖြစ်ဖြစ်အရောင်းဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ရောလူသစ်စုဆောင်းနေတဲ့မန်နေဂျာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဇာတ်လမ်းကိုလူ့ရှုထောင့်ကနေပြောပြဖို့အများကြီးရတယ်၊ မင်းပြောချင်တာအတိုင်းပဲ။ ရှေစျေး, Placester.
ဒီအချက်အလက်တွေကို Barry Feldman (ဖတ်ပါ - သင့်ကိုယ်သင်ရှာဖွေပါ။ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်) ။ သင့်ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောဖတ်လိုပါသလား။ ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ် သင့်ကိုယ်သင်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း - သင်ကိုယ်တိုင်တီထွင်ရန်သို့မဟုတ်အသစ်တီထွင်ရန်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုနည်း သူငယ်ချင်းများ Erik Deckers နှင့် Kyle Lacy တို့ကပါ။
Tags: Erik ကုန်းပတ်Kyle Lacyကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ရက်ရာဇာseth စျေးနှုန်း
SimplyCast - သုံးစွဲသူ Flow Communication Platform
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား - အဆိုပါအေဂျင်စီဗားရှင်း
ဧပြီ 8, 2014 မှာ 5: 41 pm တွင်
ဖော်ပြချက်၊ ပို့စ်အသစ်၊ ကျွန်ုပ်၏စာမူအသစ်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းမွန်သောကောင်လေးဒေါက်ဂလပ်ဖြစ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာသင်ဆိပ်ကမ်းဖြင့်တွေ့ဆုံရန်အလွန်ကြီးစွာသော Twas ။